Topimaso amin’ny tanjon’ny Emirà Arabo Mitambatra mba hanana angovo azo havaozina · Global Voices teny Malagasy
Topimaso amin'ny tanjon'ny Emirà Arabo Mitambatra mba hanana angovo azo havaozina
Hatramin'ny 2030, 30% no angovo tian'ny UAE ho azo amin'ny angovo madio
MpanoratraSania Aziz Rahman
Voadika ny 24 Avrily 2019 5:01 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Shqip, русский, Español, 日本語, English
Sahafa be natao hanangonana ny hafanan'ny masoandro ao Abu Dhabi, antsoina hoe “Shams 1″. Sary: Masdar tao amin'ny Flickr
Tamin'ny Janoary, namoaka tatitra iray ny “International Renewable Energy Agency (IRENA)” (Masoivoho iraisampirenena momba ny angovo azo havaozina) namaritany ny fironan'ny tsenan'ny “Gulf Cooperation Council (GCC)” ( Filankevitry ny Fiarahamiasa ao Golfa ) ary nandalinany momba ny sehatry ny angovo azo havaozina. Ny ao Emirà Arabo Mitambatra, hoy ilay tatitra, no manana ny 79 isanjato amin'ny fotodrafitrasa fakàna angovo azo avy amin'ny masoandro manerana ny GCC. “Vitan'ilay firenena ihany koa ny nisarika ireo tetikasa misahana famokarana angovo azo avy amin'ny masoandro, tsy andaniambola be , tsy ilàna fanohanana ara-bola” .
Araka izany, inona no nataon'ny Emirà Arabo Mitambatra mba hampitomboana ireo loharano fakàna angovo azo havaozina ary ahoana no fomba nataony hanatrarana ireo tanjona nokendreny?
Angovo azo amin'ny masoandro
Nanomboka tamin'ny 2016, namokatra herinaratra mitentina gigawatts marobe tokoa avy amin'ny masoandro sy ny entona voajanahary ny Emirà Arabo Mitambatra ( UAE ).
Herinaratra novokarina avy amin'ny loharanon'angovo azo havaozina (UAE)
Asehon'ity takelaka ity ny habetsaky ny herinaratra novokarina avy amin'ireo loharanon'angovo azo havaozina (masoandro sy entona voajanahary) tao UAE, teo anelanelan'ny 2009 sy 2016. Gigawatt/ora (GWh) no mari-pandrefesana ampiasaina eto.
Ary ity ny habetsaky ny herinaratra refesina amin'ny megawatts novokarin'ny UAE tao Abu Dhabi tamin'ny alàlan'ny masoandro, hatramin'ny 2016:
Herinaratra novokarina avy amin'ny masoandro (Abu Dhabi)
Eto dia ny herinaratra novokarina avy amin'ny masoandro tao Abu Dahbi no resahana, teo anelanelan'ny 2011 sy 2016. Ny megawatts / ora (MWh) no mari-pandrefesana ampiasaina. Ny 2016 no taona farany nahazoana tarehimarika.
Kanefa, tamin'ny 2013 i Dubai no nanokatra ny saha-masoandrony voalohany, nanomboka teo araka izany, vokarina avy amin'ny masoandro ny herinaratra ao Emirà:
Nanangana fotodrafitrasa ho an'ny takelaka fakàna angovo amin'ny masoandro (PV) sy fanangonana (CSP) izany ny ao UAE.
Ampahany amin'ny Tetikasa Angovo Madio ao Dubai hamokarana ny 75 isanjaton'ny herinaratra ilain'i Dubai avy amin'ny angovo madio hatramin'ny 2050, hanorina ny tetikasa “Concentrated Solar Power (CSP)” goavana indrindra eto an-tany i Dubai, avondrona aminà toerana iray, izay andrandrainy hamokatra herinaratra ato anatin'ny dimy taona ho avy.
Mandritra izany, Sharjah, ilay emirà lehibe indrindra ao anatin'ny firenena, dia mikendry ny hanorina ‘tanàna maharitra’ mivelona amin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro, miala 11 kilaometatra eo ho eo amin'ny seranampiaramanidina iraisampirenen'i Sharjah. NY governemantan'i Umm Al Quwain, emirà iray hafa ao anatin'ny UAE, koa dia manatontosa drafitra iray hanorenana saha-masoandro iray hamokarana 200-megawatt ao Falaj al Mu'alla,.
Miatrika ny tanjona manoloana ny fiovàn'ny toetrandro
Tamin'ny Septambra 2016, nosoniavina ny nohamafisin'ny UAE ilay Fifanarahan'i Parisy izay mikendry ny hampihenàna sy hamerana ny fiantraikan'ny fiovàn'ny toetrandro. Na izany aza, lazaina ho “tena tsy ampy” ireo tanjona napetraky ny UAE, hoy ireo fikambanana sasantsasany. Ohatra, milaza ny Climate Action Tracker fa ny firotsahana an-tsehatry ny UAE momba ny resaka fiovàn'ny toetrandro 2021 dia “tsy mifanaraka amin'ny fihazonana ny fiakaran'ny hafanan'ny tany ho ambanin'ny 2°C, raha tsy hiresaka afa-tsy ny famerana azy io ho 1.5°C takian'ny fifanarahana tao Parisy.”
Etsy ankilany, mbola mamatsy vola ny vidin'ny solitany sy ny entona voajanahary ihany koa ny UAE, na dia efa nasiana haba TVA 5% aza ny lasantsy sy ny solika mavesatra. Nefa ny vidin'ny lasantsy sy ny solika mavesatra efa tena ambanin'ny salanisa erantany. Ny Aprily 2019, 1.14 dolara amerikàna ny vidin'ny solika 1 litatra manerana izao tontolo izao, raha 0.57 dolara amerikàna ny litatra tao UAE.
Mazava loatra fa tsy ampy io mba hampihenana amin'ny fomba azo tsapain-tànana ny fampiasàna ny solika azo avy amin-javatra lò ao amin'ny firenena.
Safidy hafa amin'ny angovo azo havaozina ao amin'ny UAE
Tamin'ny 2017, araka ny IRENA, efa nanana sahady fotodrafitrasa nahafahany nahazo 0.85 megawatts avy amin'ny rivotra ny UAE.
Mampiasa vola be amin'ny resaka angovo voajanahary (bioenergy) ihany koa ny UAE.Ohatra, tamin'ny 2017 dia nosoniavin'ny Masdar (orinasa mpamokatra angovo azo havaozina) ny fifanarahana fampandrosoana iray iarahany amin'ny Bee'ah, orinasa misahana ny fitantanana tontolo iainana, mba handrafetana ny ozinina voalohany mpanodina fako ho lasa angovo ao UAE. Ao amin'ny Ivontoerana Fitantanana ny Fako ao Sharjah no hasiana io ozinina io.
Priscilla Joseph, avy amin'ny BactoWatt, fandraharahàna iray vao misondrotra mikendry ny hisintona angovo biolojika avy amin'ireo rano efa avy nampiasaina no nilaza taminy Global Voices hoe:
Ankoatry ny angovo alaina amin'ny masoandro, misy koa ny tinady tsy mitsahatra mitombo amin'ny filàna angovo biolojika, indrindra fa ho an'ireo teknolojia izay ahafahana mamadika ny fako ho lasa angovo ao UAE. Amin'izao fotoana izao, mbola vao anatin'ny dingana mianatra mamindra izy, fa antenainay atsy ho atsy ny hamadika ny teknolojian'ny angovo biolojika ho lasa vokatra azo amidy.
Kendren'ny UAE ny hamaly ny 30 isanjaton'ny filàny angovo amin'ny alàlan'ny angovo madio hatramin'ny 2030. Amin'izao fotoana izao, ambaran'i UAE fa ananany ny 0.54 isanjato amin'ny angovony madio, tafiditra anatin'io ny angovo azo havaozina miampy angovo nokleary.
Manerantany, tanjona napetraky ny IRENA hatramin'ny 2050 ny handrakotra ny 65% amin'ny angovo amin'ny alàlan'ireo loharano azo havaozina. Kanefa, vinavinain'ny IRENA koa fa araka ireo fironana ankehitriny, ny 25% amin'izay tanjona izay ihany no azon'izao tontolo izao tratrarina.
Nilaza ihany koa i Joseph, be fanahiana, fa “Tena ilaintsika tokoa ny mahita fomba iray hamenoana ilay 40 isanjato banga.”
Syria 9 ora izay